जुम्लामा आगलागी हुँदा ३५ घर जलेर नष्ट – Dainik Samchar
April 4, 2021 343
जुम्ला तिला गाउँपालिका ९ ढिपु गाउँको मुल्लीमा आगलागी हुँदा ३५ घर जलेर नष्ट भएका छन्। ७५ घर भएको मुल्लीमा ३५ घर जलेर नष्ट भइसकेको वडाध्यक्ष शेरबहादुर बोहोराले जानकारी दिए। उनका अनुसार आगो नियन्त्रण बाहिर छ।
पानी प्रयाप्त पानी नभएको आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। घरको छाना निकाल्ने र माटो हानेर आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको उनले बताए। वडाध्यक्ष बोहोराले भने,‘आगो नियन्त्रण बाहिर छ। निभाउनको लागि पानी छैन। घरमा जलेको आगो हेरेर बस्नुको विकल्प छैन।’
३५ घरभित्रको अन्नबाली सबै सखाप भइसकेको छ। आगो कसरी लागेको हो भन्ने बिषयमा जानकारी लिने प्रयास भइरहेको छ। मान्छेहरु बेहोस छन्। आगलागीको एकिन विवरण आउन बाँकी छ।
वडाध्यक्ष बोहोराले भने,‘स्याउला संकलनका लागि एक दुइ दिन भित्र गाउँले नै त्यो बस्तीमा जाने भनेका थिए। आगोले बस्ती खरानी बनाइसक्यो।’ उनले उद्धार र राहतका कार्यमा साथ दिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन्।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले आगलागी भएको खबर पाउने वित्तिकै तत्काल उद्वारको लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली आगलागी घटना स्थल तिर पठाइसकेको बताए। सदरमुकाम खलंगा देखि गएको प्रहरीको टोली पाँच घण्टा पछि आगलागी स्थलमा पुग्नेछ। उनले तत्काल राहत र उद्धारमा सहयोग गर्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले तिला गाउँपालिका–९, ढिपुको मुल्लीमा आगलागी भई ३५ घर नष्ट भएको प्रारम्भिक खवरले दुखित तुल्याएको बताए।
उद्दारका लागि घटनास्थल तर्फ सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेको अवस्था छ उनले भने,‘उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग गर्न सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गर्दछु।’ यसअघि तिला गाउँपालिका ७ पोखरी गाउँको गोठीमा आगलागी हुदा ३१ घर जलेर नष्ट भएका थिए।
यो सँगै जुम्ला आगलागीको उच्च जोखिम क्षेत्र बनेको छ। सदरमुकाम स्थित ढाण थपला सामुदायिक वन र कार्तिक स्वामी सामुदायिक वन आगलागी भएको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आगो निभाउन सफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिए।
Prevभारतको भूमी रक्षा गर्दा गोर्खा सैनिकका सम्बुर गुरूङले कस्मिरमा ज्यान गुमाए !
Nextचर्चित भारतीय क्रिकेट खेलाडी सचिन तेन्दुलकर अस्पताल भर्ना
काठमाडौं कोटेश्वरबाट अचम्मका ब्यक्ती पक्राउ ! स्वयम्भु, सीतापाइला, तीनकुने, कागेश्वरी, मूलपानी सबै ठाउँमा भ्याएछन (2014)
खुलाए बिनय र पुजाले आफ्नो अ’न्तरजातीय बिहे गर्नुको का’रण,सम्पतिको लागि बिहे गरिस भन्नेलाइ क’डा ज’बाफ (1562)
अनुहारको चाया पोतो र कालो दाग हटेन ? उसोभए यो उपाय अपनाएर हेर्नुहोस् (1214)